नेपाल च्याम्पियन बन्न सुधार गर्नुपर्ने चार कमजोरी | Hamro Khelkud
नेपाल च्याम्पियन बन्न सुधार गर्नुपर्ने चार कमजोरी
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपालले त्रिकोणात्मक टि२० आई सिरिजको फाइनलमा उपाधिको लागि शनिवार नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । खेल दिउँसो १ः१५ मा टियु क्रिकेट मैदानमा सुरु हुने छ । नेपाल लिग विजेता र नेदरल्यान्ड्स उपविजेता हुँदै फाइनलमा स्थान बनाएका हुन् ।
दमदार ब्याटिङ प्रदर्शनका साथ जित निकालेको नेपालले नेदल्यान्ड्सलाई पहिलो खेलमा ९ विकेटले पराजित गरेको थियो । दोस्रो खेलमा भने नेदरल्यान्ड्सले नेपालले प्रस्तुत गरेको २ सय ७ रनको विजयी लक्ष्य तीन बल अगाडि ७ विकेटको क्षतिमा पूरा गर्दै नेपाललाई गतिलो जवाफ फर्काएको थियो ।
आफ्ना केहि प्रमुख खेलाडी विनानै नेपाल आएको नेदरल्यान्ड्स उपाधिका साथ स्वदेश फर्किदै राम्रो सन्देश दिन चाहन्छ । घरेलु टोली नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँगको हारबाट गतिको पाठ सिक्दै फाइनलमा उपाधि जित्न चाहन्छ । दुवै टोलीको मनोबल उच्च हुँदा फाइनलमा कडा प्रतिस्पर्धा हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर उपाधि जित्न भने नेपालले फाइनलमा केहि सुधार गर्नुपर्ने कमजोरी देखिएका छन् ।
ब्याटिङ नेपालको प्रमुख समस्या मानिने गरिन्छ । यस पटक ब्याटिङमा सानदार प्रदर्शन हुँदा अन्य कमजोरीलाई खासै ख्याल गरिएको छैन । तर साना साना कमजोरी भने नेपाललाई फाइनलमा घातक बन्न सक्छन् । फाइनलमा नेपालले सुधार गर्नुपर्ने चार कमजोरी ।
१. डेथ ओभरमा उत्कृष्ट बलिङ
टि२० एकै ओभरमा पनि खेलले हार र जित निर्धारण गर्न सक्छ । समग्रमा नेपालको डेथ ओभर बलिङ हेर्ने हो भने केहि कमजोर देखिन्छ विशेष गरेर नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध दुबै खेलमा त्यति राम्रो छैन । पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सले ९९–४ को अवस्थाबाट अन्तिम १८ बलमा ३७ रन जोडेको थियो ।
दोस्रो खेलमा २ सय ७ रनको विशाल लक्ष्य पूरा गर्नेक्रममा अन्तिम १५ बलमा ४७ रन जोड्दै सानदार जित निकालेको थियो । १९ औं ओभर टि२० क्रिकेटमा निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध दुबै खेलको १९ औं ओभरमा नेपालले महँगो रन खर्चेको छ । उक्त ओभरमा पहिलो खेलमा करण केसीले १७ र दोस्रो खेलमा अभिनाश बोहराले १९ रन खर्चेका थिए । फाइनलमा नेपालले करण, अभिनाश र सोमपाललाई तीव्र गतिको बलरमा खेलाउने छ ।
अभिनाश डेथ ओभर स्पेलिष्ट बलरको रुपमा खेलेका छन् । अभिनाशबाट नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शनको अपेक्षा गरेको छ । करण र सोमपालले राम्रो साथ दिन आवश्यक देखिन्छ । नेपालले नेदरल्यान्ड्सलाई सस्तैमा रोक्न डेथ ओभरमा बलिङ गर्ने बलरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२. उत्कृष्ट फिनिसिङ
नेपालले नेदरल्यान्ड्सँग विशाल रन बनाउनेक्रममा अन्तिम १८ बलमा मात्र २८ रन जोडेको थियो । मलेसियासँग अन्तिम ओभरमा नेपालले ४ रन मात्र जोडेको थियो । नेदरल्यान्ड्सँग विशाल रन बनाउनेक्रममा अन्तिम ओभरमा ११ रन जोडेको थियो ।
मलेसियासँग पहिलो र नेदरल्यान्ड्ससँग भने सहजै ९ विकेटले जितेको थियो । आसिफ शेख र कुशल भुर्तेलले उत्कृष्ट सुरुवात दिलाई रहेका छन् । मध्यक्रममा दीपेन्द्र सिंह ऐरी र ज्ञानेन्द्र मल्ल जस्ता ब्याट्सम्यान छन् ।
तल्लोक्रममा विनोद भण्डारी, कुशल मल्ल, करण र सोमपाल छन् । यी चारै ब्याट्सम्यान ठूला सटका लागि परिचित छन् । यी चारै ब्याट्सम्यानले एकै ओभरमा खेललाई मोड्न पनि सक्छन् ।
करणले मलेसियासँग अन्तिम १३ बलमा ७ छक्का सहित ४५ रन बनाउँदै राम्रो अन्त्य गरेका थिए । त्यस्तै अन्त्य नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध गर्न देखिन्छ । विशेष गरेर अन्तिम ओभरलाई विशाल ओभरमा बदल्ल सक्नुपर्छ ।
३. फिल्डिङमा सुधार
यस सिरिजमा नेपालको फिल्डिङ कमजोर देखिएको छ । जितको लागि ब्याटिङ र बलिङ उत्कृष्ट भएर मात्र हुँदैन । फिल्डिङ पनि त्यतिनै राम्रो हुन आवश्यक देखिन्छ । नेदरल्यान्ड्ससँग नेपालले हार्नुको एक कारण फिल्डिङ थियो ।
एउटा मिस्फिल्डिङले खेलको माहोल नै परिवर्तन गर्न सक्छ । बलरको मनोबलमा गिराबट आउन सक्छ । जसको लागि नेपालले फिल्डिङमा सुधार गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
४. कसिलो स्पिन बलिङको आवश्यक
यस सिरिजमा नेपाली स्पिन बलरको इकोनमी भने त्यति राम्रो छैन । साहब आलमले ३ खेलमा ९.७७ को ईकोनमीमा २ विकेट लिएका छन् । सुशन भारीले १ खेलमा ११.६६ को ईकोनमीमा बलिङ गरेका छन् । सन्दीपले ४ खेलमा ११ विकेट लिएका छन् । तर पछिल्लो खेलमा उनको ईकोनमी १० भन्दामाथि छ ।
नेदरल्यान्ड्सँग सन्दीपले ४ ओभरमा ४८ रन खर्चेर ४ विकेट लिएका थिए । साहबले २ ओभरमा २३ रन खर्चेका थिए । मध्यक्रममा स्पिनरको प्रदर्शन निकै महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । जसमा इकोनमीमा पनि ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ ।
यो पनि : ‘ब्याटिङ सुधारको श्रेय ह्वाटमोरलाई जान्छ’ – आसिफ